Tantrisma - Wikipedia
Ny tantrisma dia vondron-dahatsoratra sy foto-pampianarana ary fombafomba izay nisy fiantraikany tamin' ireo sampan' ny hindoisma (isan' izany ny jainisma).
Tsy fivavahana ny tantrisma fa firehana nanamarika ny hindoisma sy ny bodisma ary ny jainisma. Niforona tao India ny tantrisma ary nandroso tany Sina sy Tibeta ary Japàna avy eo, ka lasa singa manan-danja indrindra ao amin' ny hindoisma ankehitriny sy ny bodisma tibetàna. Tsy fantatra marina ny tena famaritana azy sy ny tantarany ka mbola iadian' ireo manam-pahaizana hatramin' izao. Ny tantrisma dia miseho amin' ny alalan' ny fanao momba ny Yoga sy ny fombafomba samihafa miorina amin' ny lahatsoratra vokatry ny fanambaràna avy amin' ny andriamanitra Shiva ho an' ny olombelona lavo tamin' ny "vanimpotoana farany (kali yuga), araka ny kôsmôlôjian' ny hindoisma.
Ny fianarana misy sedra dia singa fototra amin' ireo tantra. Mampita amin' ny mpianatra ny tsimoka ara-panahy izay tokony hampandrosoiny amin' ny alalan' ny fanononana tsianjery ny mantra sy amin' ny alalan' ny fijerena ny zanahary iray. Raha tsy misy izany fianarana izany dia tsy misy vokany ny fampiharana rehetra.
Tamin' ny taonjato faha-6 dia nahitana fanompoam-pivavahana araka ny tantra ny tao amin' ireo sekoly sivaita na saktista, tao amin' ny bodisma mahaiana (indrindra tao Sina, tany Kôrea, tany Japàna ary tany Vietnamy) ary tao amin' ny bodisma vajraiana (bodisma adamantina na bodisman-diamondra, izay atao hoe bodisma tantrika) izay tanterahina indrindra tao Tibeta sy tany Môngôlia ary tao Japàna.
1 Ny tantra
1.2 Ny tantra
2.1 Tsy doalista ny tantra
2.2 Ny fanafahana
3 Tantrisma hindoa sy tantrisma bodista
3.1 Tantrisma hindoa
3.2 Tantrisma bodista
Ny tantra[hanova | hanova ny fango]
Ny tantra (izay midika hoe "kofehy" na "tady") Midika hoe "fitsipika", "lahatsoratra", "rijan-kevitra", "fomba fiasa", fitaovana", "haitao" na "fanatanterahana" koa io teny io.
Ny tantra dia lahatsoratra maro momba ny fombafomba ao amin' ny hindoisma sy ny bodisma, izay nosoratana amin' ny teny sanskrita, izay natao hitarihana ny mpanaraka ny fanao tantrika amin' ny asa ho amin' ireo angovo saro-takarina an' ny fanahy sy ny vatana, ary ao amin' ny firosoana mankany amin' ny fahatanterahana ara-panahy.
Ny fanao voizin' ny lahatsoratry ny tantra sasany dia efa niseho tany amin' ny taonjato faha-3, nefa ny loteratioran' ny tantra, toy ny Agama, ny Samhita, ny Tantra sivaita na visnoita, ny Tantra sy Sadhana bodista, dia vao taty amin'ny taonjato faha-5 no niseho tao India. Tamin' ny taonjato faha-7 hatramin' ny faha-8 no nampiroborobo indrindra io literatiora io. Nisy akony lehibe teo amin' ny zavakanto hindoa ny tatra indrindra tamin' ny sary sokitra. Ao amin' ny tantrisma bodista (ny bodisma vajraiana) dia heverina ho efa nisy hatramin' ny mandrakizay ny tantra sy nambaran' i Bodà sy ireo fisehony isan-karazany tamin' ny olombelona.
Ny fampiharana ny tantra dia miandalana: ao ny faran' izay tsotra ary ao ny faran' izay sarotra, mitaky indrindra fifehezana ny fihetsika, ny fiaina, ny fanononana tsianjery ary ny fijerena. Tsy maintsy mandalo fanofanana misy sedra omen' ny mpampianatra ara-panahy (guru) ny mpanaraka ny tantra, raha tsy izany dia tsy hisy vokatra azo ny zavatra atao. Amin' ny tranga mahalana dia mitaky fombafomba misy firaisana ara-nofo ny tantra.
Tsy doalista ny tantra[hanova | hanova ny fango]
Ny tantra, izay lahatsoratra vokatry ny fanambaràna, dia manolotra foto-pampianarana isan-karazany, tsy mampifanohitra foto-javatra roa, ary mandika amin' ny fomba vaovao ireo fampianarana brahmanika, izay tsapa indraindray fa misy soatoavina toheriny, ohatra amin' izany ny tsy fanomezany lanjany ny rafitra ahitana sarangam-poko. Toa manohitra ny famoizana izay manjaka ao amin' ny fampianarana ao amin' ny Veda sy ny Upanishad, sahala amin' ny bodisma tranainy dia manome lanja ny fombafomba (puja), ny vatana, ny fahatsapana ary ny fihetseham-po ny tantra, izay manankina an' izany amin' ny angovo saro-takarina ho toy ny fatorana mampiray ny matiera amin'ny fanahy, ny fisehoana amin' ny loharanon' izany (andriamanitra). Ny tanjona dia ny fandosirana ny tsingerim-pahaterahana (samsara) sy ny fandosirana ny fetran' ny fiainana mahazatra. Amin' ny tantra, ny fahasambarana dia firaisan' ny foto-javatra roa, lahy sy vavy, avy amin' ny aseho sy ny mihoa-draha.
Ny fanafahana[hanova | hanova ny fango]
Ny fanafahana, araka ny tantra, dia azo amin' ny alalan' ny fanakambanana ny faniriana ao amin' ny fiainam-panahy, amin' ny alalan' ny fanatanterahana fombafomba sy fampiasan-tena araka ny yoga. Ny fanao (tantrika) dia manova ny vatana mba hahafaha-mampitambatra azy amin' ny herin' izao tontolo izao. Ny tantrisma dia mikendry ny fanafahana ny olombelona tsy mitaky fialana amin' izao tontolo izao. Manana tendro misintona roa ny andriamanitra, dia ny tendro lahy, izay mahatsiaro tena nefa tsy miasa, sy ny tendro vavy, izay miasa sady mpamorona angovo (shakti). Izany fampianarana izany dia miely ao amin' ireo sampana maro ao amin' ny hindoisma.
Noho izy ireo mikatsaka ny fanafahana eto amin' izao fiainana izao (jivanmukti), izany hoe mampifanaraka ny fiainanana eto amin' izao tontolo izao (bhoha) sy ny fanahafana (moksha), ny tantra dia manantitra ny fahatanterahan' ny fikasan' ny olona tsirairay. Mitaky fihoarana ny toeran' ny olombelona tsotra mankany amin' ny fahatanterahana ara-panahy, tsy misy fikatsahana hanana fahefana sy tanjaka mahagaga izany. Maro ny fomba fiasa amin' izany, ka ny fantatra indrindra dia ny fanononana ny mantra, ny fijerena ireo andriamanitra izay heverina ho toy ny modelin' ny tanjaka manokan' ny fanahy, ny fampiasan-tena araka ny yoga, ny fombafomba ahitana fihinanana hena sy fisotroana toaka.
Tantrisma hindoa sy tantrisma bodista[hanova | hanova ny fango]
Tantrisma hindoa[hanova | hanova ny fango]
Ao amin' ny hindoisma dia maneho ny tendro tsy miasa ny zanafary lahy, fa ny zanahary vavy kosa maneho ny tendro miasa. Ny tantra hindoa dia manandratra indrindra ireo shakti, izay tokony hofohazina. Ny shakti dia hery na angovon-janahary ao amin' ny olombelona, izay ivavahana toy ny andriamanitra amin' ny endriky ny andriamanibavy toa an' i Kali, i Durga, i Parvati, ary i Laksmi.
Ao amin' ny hindoisma, ny kundalini ("ilay nahorongorona"), bibilava mihorongorona amin' ny foto-kazo iray, dia sary fanoharana ny fifohazan' ny angovo, izay manondro ny fomba fivelarany. Izany dia fanehoana avy amin' ny fanirian' olombelona ny nataon' ny fanirian-janahary izay niteraka an' izao tontolo izao. Ny kundalini, izay tahaka ny bibilava eo am-pototry ny hazo, dia hiakatra manaraka ny taolan-damosina hatrany amin' ny karandoha, mba hanatanteraka ny firaisana amin' ny zanahary lahy, firaisana amin' ny andriamanitra. Zary zavamananaina tonga lafatra (siddha) noho izany ny olombelona. Tamin' ny taonjato faha-6 dia efa nahitana fanompoam-pivavahana araka ny tantra ny tao amin' ireo sekoly sivaita sy saktista.
Tantrisma bodista[hanova | hanova ny fango]
Ao amin' ny bodisma dia maneho ara-tandindona ny asa ao amin' ny fisehoana, fa ny zanahary vavy kosa dia maneho ny fahendrena ao amin' ny tsi-fisehoana, na fahafoanana. Ny tantra bodista dia sady ahitana firesahana endrika zanahary lahy (Kalachakra, Chakrasamvara, Hevajra, sns) no ahitana firesahana endrika zanahary vavy (Vajravarahi, Tara, sns). Tamin' ny taonjato faha-6 dia efa nahitana fanompoam-pivavahana araka ny tantra ny tao amin' ny bodisma mahaiana (indrindra tao Sina, tany Kôrea, tany Japàna ary tany Vietnamy) ary tao amin' ny bodisma vajraiana (bodisma adamantina na bodisman-diamondra, izay atao hoe bodisma tantrika) izay tanterahina indrindra tao Tibeta sy tany Môngôlia ary tao Japàna.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tantrisma&oldid=1038996"
Voaova farany tamin'ny 16 Oktobra 2021 amin'ny 15:35 ity pejy ity.